ဂေဇက်ရွာသူရွာသားများသို့တောင်းပန်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ဂေဇက်ရွာသူရွာသားများသို့တောင်းပန်ခြင်း
Posted by ဇောက် ထိုး on May 9, 2012 in My Dear Diary, Myanmar Gazette | 13 comments
ဂေဇက်ရွာသူ ရွာသားအားလုံးကို ကျွန်တော်မှားတာရှိလျှင်ခွတ်လွှတ်ပါရန် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဂေဇက်ရွာကိုရောက်တာမကြာသေးပါဘူး။ ဂေဇက်ရွာမှာ ရေးသားနေသူများရဲ့စာများကိုဖတ်ပြီး ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ မိတ်သစ်ဆွေသစ်တွေတိုးခဲ့တယ်လို့လဲ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဂေဇက်ရွာမှာ ရေးသားကြတဲ့ ရွာသူရွာသားများရဲ့စာများကိုဖတ်ရင်းနဲ့ နာမည်လေးများကို မှတ်မိသမျှစာရင်းလေးပြုပြီး ဂေဇက်ရွာကို အပြင်မှာ တကယ်ရှိနေတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာလိုဖန်တီးပြီး ဂေဇက်ရွာထဲမှာရေးနေသူတွေကို လဲ ရွာသူရွာသားတွေလိုသဘောထားကာဇာတ်လမ်းလေးဆင်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့ ရူးခဲ့ရသလို..လက်တွေ့လေးလဲ စမ်းရေးကြည့်မိပါတယ်။
သူကြီးခိုင်ကိုတော့ စာတွေဖတ်ရင်းနဲ့ပဲ သိသွားခဲ့တာပါ။သူကြီးခိုင်ဆိုတဲ့ အသုံးတွေကိုတွေ့လို့ပါပဲ။ နောက် ကိုဗိုက်ကလေးပုံလေးကိုကျွန်တော် အရမ်းသဘောကျသွားပြီး ကိုဗိုက်ကလေးကို ဂေဇက်ရွာရဲ့ချစ်စရာ အရက် သမား လေးပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအတူ အခြားအခြားသောရွာသူ ရွာသားများ ကိုလဲ ပျော်ရွင်ဖွယ်ဇာတ်ဆောင်လေးအဖြစ်ပဲဖန်တီးမယ်။ နစ်နာစရာ ဇတ်ဆောင်အဖြစ်ကိုတော့ မည်သူကိုမျှမဖန်တီးဟုလဲ စဉ်းစားထားခဲ့ပါတယ်။ ကိုကြောင်ကြီးဟာ ကျွန်တော်ကိုဦးဆုံးနှုတ်ဆက်သူဖြစ်သလို နာမည်နဲ့ ကြောင်ရုပ်ကြီးကလဲ ခန့်တာနဲ့ ကာလသားခေါင်းဆိုပြီး စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဂေဇက်ရွာမှာ ဘုန်းကြီးနာမည်နဲ့ကတော့ အရှင်အရိယ ဆိုတဲ့ဆရာတော် တစ်ပါးကိုပဲ တွေ့သေးတာနဲ့ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အဖြစ် ဖန်တီးခဲ့တာ ပါ။
လင်မယားခန်းမှာ အမှန်ယောကျာ်းတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အမှန်ရေး ခဲ့လျှင် မကောင်းလောက်ပါဘူးလို့စိတ်ကူးမိပြီး ခင်လတ်ဆိုသူကို စာရေး သူနဲ့သိတဲ့ ကိုခင်လတ်ဆိုတဲ့သူ တစ်ဦးလဲရှိလို့ ရေးခဲ့မိပါတယ်။ မိန်းမချင်း ဆိုတော့ အဆင်ပြေမယ်လဲအောက်မေ့မိလို့ပါ။ အတိသဉ္ဖာနာဂရချစ်သူဆို လျှင် အတိသဉ္ဖာရဲ့သား မောင်ချစ်သူ စသဖြင့် ပျော်ရွင်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ် ချက်နဲ့ ကျွန်တော်ပုံဖော်လိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွင်စေလိုချင်း…ရွာ သူရွာသားများ စိတ်ဝင်စားစေလိုချင်း..စတဲ့အကြောင်းများကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူများကိုပင် ချစ်စရာအသွင်ဖြင့်ရေးရန် စိတ်ကူးခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါမှာ အဲဒီလို နာမည်သုံးတာကို မကြိုက်တဲ့ နာမည်သုံးစရာ ရှားသလားဟု ပြောဆိုသံကြားလိုက်ရတဲ့အခါ လွန်စွာ စိတ် မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ စာရေးသူထက် အရေးခံရသူ စိတ်ဆင်းရဲ သွားသလားဆိုတဲ့…ငါ့ကြောင့်များ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားသလားဟု နောင်တ ရမိသွားပါသဖြင့်…. ပျော်ရွင်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်။ အားလုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ခုမှတပါး အခြားလုံးဝမပါကြောင်း ၀န်ခံလိုပါသည်။စာရေးသူမှာ အပြစ်တစ်စုံတရာရှိပါက ခွတ်လွတ်ပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါကြောင်း…..နောက်နောင် ယင်းကဲ့သို့ရေးသားမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါမည်ဟု ကတိပြုပါကြောင်း အားလုံးကို တောင်းပန်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ…..တောသားမြို့ရောက်စ….မြောက်စွစွဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ သဘောထားပေးကြပါလို့ အနူအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါကြောင်း….
ခင်ဗျားစာကို ကျွန်တော် ခြောက်ယောက်မြောက်လောက်မှာ ဖတ်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်က ည မအိပ်တဲ့လူဆိုတော့ စောစောစီးစီး မန့်လိုက်ပါမယ်နော့။ စောစောစီးစီး မန့်တယ်ဆိုမှတော့ ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိအောင်မန့်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ တကယ်လည်း ခင်ဗျားရဲ့ အမှားကိုဝန်ချတောင်းပန်စာက မင်္ဂလာရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားတောင်းပန်စာကို ဖတ်ရတာ ခင်ဗျားကိုပြန်မြင်ရတာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ခင်ဗျားအမှတ်မထင်ပြောလိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ခင်မင်လေးစားတဲ့ အမ နှစ်ယောက်စလုံးကိုယ်စား ကျွန်တော်က မနေ့ညကတည်းက ခင်ဗျားကို မန့်မယ် တိုက်ခိုက်မယ်စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်စိတ်ကို တစ်ထစ်လျှော့ခဲ့တယ်။ အဲဒါ ပြန်လည် အကျိုးပေးတယ်လို့ယူဆတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးလို့ ရွာထဲကို ခဏ ၀င်ကြည့်တဲ့အခါ ကိုဇောက်ထိုးစာကိုတွေ့ရလို့ မအိပ်ခင် နည်းနည်းပြောခဲ့ပါရစေဗျာ။
အစ်ကိုက စိတ်ထဲရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဲထား။ သူတို့ကတော့ ထိခိုက်တယ်လေ။ ထိခိုက်တဲ့အပေါ်သကြီးကတောင် သူ့ကို ဘာပြောပြော ဖြစ်တယ်။ အခြားသူကိုတော့ ဘာညာပြောတယ်မလား။ ဒီအပေါ်မှာ ကာယကံရှင်နှစ်ယောက်က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတုံ့ပြန်သွားခြင်းအပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော်သိပ်ကို လေးစားမိတယ်။ အဲဒါ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ နောက်မှာဖြစ်လာမယ့် လေးစားမှုလို့ယူဆမိတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူတစ်ယောက်တစ်ခုခု မှားတိုင်း နင်ပဲငဆ လုပ်နေရင်လည်းဘယ်ဟုတ်တော့မလည်းဗျာ။ ဒီတော့ဗျာ စောစောစီးစီး ခင်ဗျားပို့စ်တက်လာတော့ ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ခင်မင်နေတဲ့ အစ်မတော်တွေကလည်း ခွင့်လွှတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အတည့်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ နောက်များမှာလည်း ကျွန်တော်က မှားခဲ့ရင်(မှားလည်းမှားမှာပါ)ခင်ဗျားလို ရဲရဲရင့်ရင့် ၀န်ခံရဲတဲ့သတ္တိမွေးပါ့မယ်ဗျာ…..
(ချွင်းချက် ။ ။ ခင်ဗျားတွတ်ပီပရိသတ်လားမသိဘူး….ဟီးဟီး….)
ကို marblecomment ရေ
ကျနော်က သိပ်ပြီး ကွန်မန့်တွေ ဘာတွေပေးလေ့ မရှိပေမယ့် ခင်ဗျားစာလေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက မရှင်းဘူးဗျ။ ရောပြီး ပြောသွားတယ် ထင်လို့ပါ။ အင်းအခု ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ဆောင်းပါးရှင်နဲ့ရော ဆောင်းပါးနဲ့ရော မခင်လတ်တို့ မဝေဝေတို့နဲ့ပါ မဆိုင်ပါဘူး။ ကျနော်လည်း သူတို့ကို မသိပါဘူး။ မခင်လတ်တို့ မဝေဝေတို့က တော့ဘယ်စိတ်ဆိုး မလဲဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီဆောင်းပါးက သူတို့ကို ရယ်စရာအနေနဲ့ ထည့်ရေးထားတာကိုး။ ဒါပေမယ့် သူတို့နဲ့ မသိတဲ့ လူတယောက်က သူတို့ရေးတဲ့စာတွေ သူတို့အယူအဆ တွေကို နာမည်တပ်ပြီး ဝေဖန်မယ် ဆိုပါစို့။ ပိုဆိုးတာက အဲဒီဝေဖန်တဲ့ လူကအယူအဆတွေရော အချက်အလက်တွေပါ လွဲနေတယ်ဆိုရင် သူတို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားပဲဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းငုံ့ခံလိမ့်မယ် မထင်ဘူးဗျ။
ဥပမာဗျာ “ဘောက်မဲ့ကြောင့် ဒီလိုပြောရတာတုန်း” လို့ဆိုရင် ကာယကံရှင်တွေကလည်း “အေး ဟောဒီအချက်တွေကြောင့် ဟောဒီလို ပြောရတာဟေ့” လို့ ပြန်ပြောမှာပေါ့ဗျ။ ဘုရားရှင်လက်ထက် တုန်းကတောင် ဘုရားရှင်နဲ့ ဝါဒပြိုင်ပြီး ရေထဲဆင်းသေတဲ့ တိထ္ထိဆရာကြီးတွေ သွေးအန်သေတဲ့ တိထ္ထိဆရာကြီး တွေရှိခဲ့တယ်ဗျာ့။ အဲဒါ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့က ဘုရားရှင်ကို ယာဉ်ယာဉ်ကျေးကျေး မတုန့်ပြန်ဘူးတို့ ဘာတို့ ပြောလို့မရဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘုရားရှင်က သူတို့နေတဲ့ နေရာတွေကို မသွားသလို သူတို့ကိုလည်း ဝါဒပြိုင်မယ်လို့ ဖိတ်ခေါ်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူတို့ဘာသာ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ရှင်ကြီးဂေါတမနဲ့ တန်ခိုးပြိုင်မယ် ဘာညာဆိုပြီး လာကြတာဗျ။
လူတယောက် တခုခုမှားတာနဲ့ နင်ပဲငဆ မလုပ်သင့်ဘူး ဆိုတာတော့ ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှားတဲ့လူကလည်း နောက်တကြိမ်ကျတော့လည်း အပေါ်ပိုင်းမှာ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ အောက်ပိုင်းကျတော့ သူများကို မထိတထိနဲ့ ပုတ်ခတ်မယ်ဆိုရင် မျက်စိအမြင်သန်တဲ့လူက မြင်ပြီး ပြောမှာပေါ့ဗျ။ ရန်သူတောင် အလံဖြူတင်ရင် ကျေအေး ရသေးတာပဲဗျာ။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားကို ကြုံလို့ပြောရရင် ကျနော်က ၂၁ရာစု လူဝါဒတို့ ဘာတို့ကို သိပ်ပြီး အယုံအကြည် မရှိဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူဆိုတာ အစွဲမကင်းဘူးဗျ။ ဒီတော့ လူသားတိုင်းကို အတူတူချစ်ခင် လေးစားပါတယ် ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ ဥပမာ ကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့ လူက သူများကို နာမည်တပ်ပြီး ပုတ်ခတ်တဲ့အခါကျတော့ “တူးဖော်ကြ ဆွေးနွေးကြ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့” လို့အော်ပြီး ကိုယ်လူခံနေရပြီ တဘက်ကပြောတာ တွေကလည်း အမှန်တွေချည်းပဲ ကျပ်ပူတောင်မထိုးနိုင်ဘူး ဆိုမှ “မျက်တော်ပြေ” တို့ “မေတ္တာပို့ပါ” တို့ “သစ္စာပြုပါ” တို့ သစ္စာမေတ္တာရွှေမန်းသဘင် တို့အော်နေတာဟာ ရယ်စရာပဲဗျာ့။
အမျိုးသားရေး လည်းဒီအတိုင်းပဲဗျ။ နောက်ကြုံရင် အကျယ်ချဲ့ပြီး ပြောပါမယ့်။
အမယ် တယ်ဟုတ်ပါလား။ ငါ့ကွန်မန့်လေးလဲ အနီများတောင် ထိနေပါလား။ ဟယ် တတ်နိုင်ပါဘူး။ အင်းဘယ်သူ့ကိုမှလည်း နာမည်တပ် မဝေဖန်ပဲနဲ့များ ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်။ ဟာ သိပြီ။ ဘုရားရှင်နဲ့ ဝါဒပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးလို့သွေးအန်ပြီး သေသွားတဲ့ တိတ္ထိတက္ကတွန်းကြီး တွေအကြောင်းပြောမိတာကိုး။ သူတို့ရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေ ရှိနေသေးတာကိုး။ အင်း ဒါတော့ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။
အော် သူတို့က ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ် အကြောင်းပြောရင် နားခါးတတ်တာကိုး။ ဟုတ်မယ် ဟုတ်မယ်။ ဘုရားရှင်အကြောင်းပြောလို့ ငါ့ကိုပါ ရန်ငြိုးဖွဲ့တော့မယ် ထင်တယ်။ အင်း မှန်တာကိုတော့ မှန်တဲ့အတိုင်း ပြောရမှာပဲ။ နောက်ဆို တိတ္ထိဆရာကြီး တွေက အောက်လမ်းပညာတွေနဲ့ ငါပြောသမျှ ရေးသမျှကို နီအောင်လုပ်တော့မယ် ထင်တယ်။ အင်း အဲဒီလိုလုပ်လဲ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့ မကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားရှင်အကြောင်းကတော့ ကြုံကြိုက်ရင် ပြောရအုံးမှာပဲ။
အမယ် တယ်ဟုတ်ပါလား။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ရွတ်ပြီး တိတ္ထိဆရာကြီးတွေရဲ့ အောက်လမ်းပညာတွေကို ညီးတွားလိုက်တာ သမ္မာဒေဝ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက မနေနိုင်လို့ ရောက်လာတယ်နဲ့ တူတယ်။ ကွန်မန့်လေးတောင် စိမ်းသွားပြီ။ သမ္မာဒေဝ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ ခင်ဗျာ နောက်လဲ ကူညီဝိုင်းလို့ မှိုင်းမတော်မူကြပါ။
ကျုပ်မမတွေကိုထိလို့ ကျုပ်ဆို အသားတွေ
မန္တလေးက အန်ကယ်ပေါက်ကိုဆိုရင် စိတ်နဲ့တောင်မပျစ်မှားနဲ့နော
အင်း ကျုပ်ကတော့ မတရားဘူးထင်ရင် ဘယ်သူ့မှမခံဘူးဗျာ့။ ကျုပ်အမျိုးတွေကိုလာထိရင်လည်း မခံဘူး။ တကယ့်ကို မျိုးချစ်ကြီးဗျ ဟဲ ဟဲ။
ကိုဇောက်ရေ ဆန်တစ်ဆုပ် ပိုစ့်ကို ဖတ်အပြီးမှာ ဂေဇက်အတွက် ဘာသာရေးအယူအဆ ကို ဘာသာရေးလို့ မထင်ရအောင်ရေးနိုင်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်တွေ့ရပြီ ဆိုပြီး ဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ။ ဂေဇက်မှာတော့ မူပြငများမယ် မှတ်တာဘဲ။ ကျုပ်လဲပါတာပေါ့ဗျားအေ
သဂျီးကတော့ ကြိုက်သလောက်ရေး သရော်ကောင်းရင် အပြန်အလှန်တောင်အားပေးမယ်ဒဲ့
သများကိုလည်း ကြိုက်သလောက် ဥခိုင်း အဲ့ဟုတ်ပါဘူး ယောင်ကုန်ဘီ
တောင်းပန်ခြင်း.. ကျေအေးခြင်းဟာ.. မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ပါ…
ကျွန်မ က အဲဒီလို ဆဲဆိုနေတာ မဟုတ်ပေမဲ့ အနီးကလူ နဲ့ ရန်ဖြစ်ငြင်းခုံ နေကျမို့ ကျွန်မ က ကိစ္စမရှိပေမဲ့ အပျိုလူလွတ်လေး ဝေဝေ့ ကိုတော့ ဒီလို ဇာတ်ရုပ် ထားဖို့ မသင့်တာပါဘဲ။
ဒါပေသည့် ဒီလိုဘဲပေါ့ ကိုယ်တော်ရယ်။
အမှားသိလို့ အမှန်ပြင်လိုက်ရင် ပြီးတာပါဘဲ။
ကျွန်မ ကိုတော့ တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူး။ :-)
“”အတိသဉ္ဖာနာဂရချစ်သူဆို လျှင် အတိသဉ္ဖာရဲ့သား မောင်ချစ်သူ စသဖြင့် ပျော်ရွင်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ် ချက်နဲ့
ဆရာဇောက်ထိုးခင်များ. ကျနော့်နာမည်ကလေ. ပုသိမ်မြို့ ရဲ့ ရှေးနာမည်(၅)ခုထဲကတစ်ခုပါ။ပုသိမ်သူကိုချစ်နေမိလို့ 